५४ वर्ष पुगे अक्षयकुमार, कुल सम्पत्ति कति ?| Yatra Daily
५४ वर्ष पुगे अक्षयकुमार, कुल सम्पत्ति कति ?
एजेन्सी भदौ २५, २०७८ शुक्रबार
बलिउडमा खेलाडी कुमारको नामबाट परिचित अभिनेता अक्षय कुमारको ५४ वर्ष पुगेका छन् । ९ सेप्टेम्बर १९६७ मा अमृतसरमा जन्मिएका अक्षयको वास्तविक नाम राजीव ओम भाटिया हो । दमदार अभिनयबाट बलिउडमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल उनका पछिल्ला समय हरेक फिल्मले राम्रो कमाउने गर्दछ । ‘सौगन्ध’ बाट बलिउड डेब्यु गरेका अक्षयलाई फिल्म ‘खेलाडी’ले बलिउडमा उचाई दिलाएका थियो ।
त्यसपछि उनका ‘खिलाडीयोका खिलाडी’, ‘इन्टरनेशनल खिलाडी’, ‘खिलाडी ४२०’, ‘हेरा फेरी’, ‘अजनबी’, ‘रुस्तम’ ‘गुड न्युज’लगायत थुप्रै फिल्म आएका छन् । स्टन्ट र एक्सनका कारणले समेत चर्चित अक्षय एक्सन फिल्मको अलवा कमेडी फिल्म समेत अभिनय गर्दछन् । उनको कुल सम्पति २३६ मिलियन डलर रहेको छ । फोब्र्सको एक लिष्टमा अक्षय दुनियाँमा सबैभन्दा बढी कमाउने अभिनेताको सूची मा चौथो स्थानमा अटाएका थिए । उनी फिल्म तथा बिज्ञापनबाट करोडौ कमाउने गर्दछन् ।
अक्षयका साथ एक सी फेसिङ्ग घर रहेको छ । जसमा उनी परिवारका साथ बस्दछन् । यसको अलवा उनीसँग ४ फ्ल्याट रहेका छन् । हरेक फ्ल्याटको मूल्य ४.५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अक्षयको गोवामा एक बिलासी विला पनि रहेको छ । जहाँ उनी परिवारसँग छुट्टी मनाउन पुग्ने गर्दछन् ।
उनलाई गाडीको पनि शोख छ । उनका महँगा ब्राण्डको केही गाडी छन् । बाइकमा पनि रुचि राख्ने उनीसँग बाइक कलेक्सन समेत रहेको छ । अक्षय एक प्राइभेट जेट विमानको पनि मालिक हुन् । जसको मूल्य २६० करोड (भारु) रहेको छ । अक्षयले यसको प्रयोग यात्राका लागि गर्ने गरेका छन् ।
थुप्रै सम्पत्तिका मालिक अक्षय स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो धन मान्दछन् । त्यसैले पनि उनी रातीको पार्टीबाट आफुलाई सधै टाढा राख्दै आएका छन् । योग र एक्सरसाइजबाट आफुलाई फिट राख्ने उनी फिटनेसको मामलामा लाखौ मानिसको प्रेरणा हुन् ।
किस्सा : एयरहोस्टेससँग प्रेममा परेका थिए सञ्जय दत्त, यो शर्तका कारण स्वीकार गरिनन् विवाहको प्रस्ताव
तिहारमा अक्षय र कट्रिनाको ‘सूर्यवंशी’ रिलिज हुने
चिया पिउनुहुन्छ ? एक दिनमा कति चिया पिउने ? एक पटक अवस्य पढ्नुहोस